Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo sheegay in aan la joojineyn doorashada | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo sheegay in aan la joojineyn doorashada
Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Heer Federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in la sixi doono khaladaad kasta ee ka yimaada doorashooyinka socda ee Golaha Shacabka oo cabashada badan ka timid.
Guddoomiyaha oo Wareysi siiyay tv-ga Universal wuxuu sheegay in aan la hakineyn doorashada Golaha Hsacabka, balse lagu laaban doono kursi kasta ee aan marin habraaca rasmiga.
Sidoo kale wuxuu hadalkiisa uu intaasi ku daray in baaritaano ay ku sameeyeen laba kursi oo kamid au kuwa lagu doortay Baydhabo kadib safar ay ku tageen ay go’aamiyeen in dib loogu laabto, kuwaas oo kala ah HOP#103 oo uu dacwad ka gudbiyay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo HOP154 oo dhawaan loo doortay Sareedo Maxamed Cabdalla.
Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo sheegay in aan la joojineyn doorashada was last modified: December 6th, 2021 by warsan radio
Dhageyso:-Dood ku saabsan saameynta uu ku yeeshey Covid 19 Daraawalada Baabuurta loo yaqaano Dhaweeyada.
Dhageeyso Barnaamijka Kulanka Warsan ee Caawa 27-10-2016
Wariye Saciid Yuusuf oo lagu dilay magaalada Muqdisho
Qoraal+Sawir:- Bohosha Yaaqkumaan ee Baydhabo, oo daad ku soo rogmada yaa dilay gabar qaangaar ah xili ay ku sii jeeday gurigooda oo ku yaala Xaafadda Daarasalaam Arbacadii.